Van Dijk Oo Ku Biiray Xiddigaha Liverpool Ee Neceb Sergio Ramos Sabab La Xidhiidha Mohamed Salah | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Van Dijk Oo Ku Biiray Xiddigaha Liverpool Ee Neceb Sergio Ramos Sabab La Xidhiidha Mohamed Salah
(18-11-2018) Lix bilood ka dib finalkii Champions League ciyaartoyda Liverpool ayaan weli ka cafanin Sergio Ramos wixii uu ku sameeyay Mohamed Salah kulankii finalka.
Daafaca dhexe ee Liverpool Dejan Lovren ayaa si joogta ah u weerarayay kabtanka Real Madrid Sergio Ramos dhowrkii bilood ee ugu danbeysay, isaga ayaana qosolka ku danbeeyay ka dib markii ay Croatia ay 3-2 kaga badisay Spain, wuxuuna ciyaarta ka dib Ramos ku tilmaamay xubinta taranka dumarka.
Laakiin haatan xiddiga ay Lovren iska garab ciyaaraan ee Virgil van Dijk ayaa qeyb ka noqday.
Van Dijk ayaa la weydiiyay awooda difaacasho ee Ramos, waxaana xiddiga Netherlands uu qirtay inuusan taageero u aheyn Ramos.
Ramos ayaa inta badan loo texgeliyaa mid ka mid ah daafacyada ugu fiican kubada cagta laakiin waa fekrad uu ka soo horjeedo Van Dijk.
“Ramos ma ahan daafaca ugu fiican” ayuu Van Dijk u sheegay De Telegraaf.
Waa ciyaaryahan weyn, waana ixtiramayaa wixii uu shaqeystay laakiin ma ahan nooca daafac dhexe ee aan jeclahay. Ramos saaxiibkiisa Real Madrid Raphael Varane ayaa ah midka aan jeclahay. Waa difaac aad u fiican, da’ yar, waxbadana ku guuleystay.
“Ma jecli qaabka uu Ramos wax u difaacdo. Waxaan isku dayaa inaan ka fogaado waxyaabaha qaar ee uu sameeyo.”
Haddii hadalka Van Dijk uu xiriir la leeyahay wixii dhacay finalkii Champions League lama oga, laakiin waxaad ka shakin kartaa in fekerka qof walba oo Liverpool jooga uu ka qabay Ramos inuu isbedelay habeenkaas.